Express Your Vision ofaHome Worth Talking About – LYCA COMMUNICATIONS
Jotun renews the promise of beautiful interiors that last with new Majestic paints and 2020 Global Colour Trends
Style meets function with new and improved Majestic True Beauty, all new water-based Majestic Supreme Finish for wood and trims, and 12 additional colours for the year 2020.
Withanew decade soon upon us, some things just never change. A beautiful home is alwaysasource of pride and comfort. Another constant that doesn’t waver with time? Jotun’s commitment to giving homeowners beautiful and long-lasting interiors worth talking about.
These days, discerning homeowners haveaspecific ambience in mind when picking interior paint colours and finishes. The home, after all, is an expression of one’s personality; an extension ofacurated lifestyle. Jotun’s Majestic paints accomplish this by elevating or complementing the homeowner’s aesthetic vision – now and in the years to come. For inspiration, turn to the 2020 Colour Design By Jotun:aguide to the coming year’s trending colour combinations.
Developed specifically to give superior flow and levelling, Majestic True Beauty’s enhanced formula deliversasmoother and more luxurious wall finish that homeowners will be proud of. Improvements to stain resistance ensure these walls are now even easier to keep clean, so your home always looks fresh and new. With Jotun’s very own True Colour Technology deliveringamore uniform colour, you can be sure of consistently beautiful walls.
An aesthetically pleasing home is not just about walls and furniture; it is also expressed through the finer details. With this in mind, we are introducing our all-new Majestic Supreme Finish,awater-based wood and trims paint withabeautiful flawless finish. Its excellent stain-resistant properties ensure easy cleaning, without the loss of rich colours. For the comfort of your family and healthier home, Majestic Supreme Finish is low odour and dries more quickly than conventional solvent-based paint.
‘The cusp ofanew decade is an especially meaningful time of transition when the colours we surround ourselves with can carry extra resonance,’ says Larsen. ‘They are infused with hope and determination. They can represent our aspirations to learn or travel more; our intention to be more mindful or meditative; our resolve to give ourselves space to create and licence to dream.’
NEW JOTUN COLOURS FOR 2020
A lush and organic colour that brings nature indoors.
A versatile chalky yellow tone – mature and masculine.
The colour of raw earth – warming and protective.
The perfect balance of blue and green.
A warm and muted plum tone – opulent and unusual.
An explosion of creative energy – bold and unique.
A smooth, sophisticated colour – the essence of discretion.
A warm and earthy hue – wanderlust in burnt orange.
Energising withagolden touch – warm and playful.
A light and subtle colour – relaxing muted mint.
A sophisticated wine-dark shade – quiet and powerful.
An elegant and calm tone – evoking the freedom of the sea.
‘When we design new colours, we ask ourselves what we want the colour to express. It is about interpreting trends and tendencies in global societies and reflecting will be important to people in the years to come – we want our colours to help make people’s livesalittle bit better.’
Alongside their emotional impact, the new colours have also been designed with practicality in mind. The Jotun team have matched each of the 12 shades with colours from the Timeless range –acollection of eight existing shades chosen for their enduring appeal and versatility. 2020 Colour Design By Jotun includes details of effective colour combinations, allowing users to mix and match colours to express their identities and aspirations. To address the fact that, often, the full impact of colour can be gauged only once it has been applied, Jotun has developed Jotun Colour Assurance,amethod of ensuring that every colour shown in the card appears exactly as it would on the wall – so there are never any unpleasant surprises.
Featuring inspiring photography by Line Thit Klein and set design from long-standing collaborators, Oslo creative studio Kråkvik & D’Orazio, 2020 Colour Design by Jotun is just one ofanumber of global channels through which Lisbeth and the Jotun colour team share their insights and inspiration. Find out more via jotun.com and theJotun Colour Design app.
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်
ပြောစမှတ်ပြုလောက်တဲ့ အိမ်လုံးတစ်လုံးကို သင့်စိတ်ကူးအမြင်နဲ့ ဖော်ညွှန်းကြည့်ရအောင်
၂၀၂ဝအတွင်း ခေတ်စားသည့် အရောင်များနှင့်အတူ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရေရှည်ခန့်ညားလှပတဲ့ Majestic Paints သုတ်ဆေးအသစ်များနဲ့ အိမ်အတွင်းပိုင်းလေးများ ဖြစ်စေဖို့ Jotunမှ အသစ်တဖန် ကတိပြုအပ်ခြင်း
ထပ်မံအဆင့်မြှင့်ထုတ်လုပ်ထားသော Majestic True Beauty, သစ်သားအလှဆင် ထောင့်ချိုးတွေ အတွက် အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေဆေး Majestic Supreme Finish နှင့် ၂၀၂၀ အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အရောင်၁၂ရောင်နဲ့ဆို သုံးလို့လဲကောင်း စတိုင်လ်လဲမိနေမှာပါ။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီ ဆိုပေမယ့် တချို့အရာတွေကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲ ပါဘူး။ လှပတဲ့အိမ်ကလေးဆိုတာ အမြဲတမ်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာနဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံး နေရာတစ်ခုပါ။ အချိန်နဲ့အတူ ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ နောက်ထပ်တည်မြဲတဲ့ အချက်ကဘာများဖြစ်မလဲ? အဲ့တာကတော့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေအတွက် လှပပြီးပြောစမှတ်တွင်လောက်တဲ့ ရေရှည်ခံ ခန့်ညားလှပသည့် အိမ်အတွင်းပိုင်းဖန်တီး ပေးချင်တဲ့ Jotun ရဲ့ဆန္ဒပါ။
အိမ်အတွင်းပိုင်းသုတ်ဆေးအရောင်ရွေးချယ်ခြင်း၊ အချောသတ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယနေ့ခေတ် ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာ ဖန်တီးချင်တဲ့သီးသန့်ပုံစံရှိပါတယ်။ ခြုံပြောရမယ်ဆိုလျှင် အိမ်ဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး- စနစ်တကျ ဖော်ဆောင်ထားတဲ့ လူနေမှုဘဝကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ်နှင့် လာမည့်နှစ်များတွင် Jotun ၏ Majestic paint နှင့် အိမ်ရှင်များရဲ့ ခမ်းနားသည့်စိတ်ကူများကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အရောင်ရွေးချယ်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ Jotun ရဲ့ 2020 Color Design ကိုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။ ယခုနှစ်မှာခေတ်စားလာမည့် အရောင်အတွဲအစပ်များကို လမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
ညီညာချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ဖြစ်စေရန် အထူးတလည်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ Majestic True Beauty ၏ ဖော်မြူလာသည် အိမ်ပိုင်ရှင်များ ဂုဏ်ယူနိုင်လောက်သည့် ပိုမိုချောမွေ့သောအိမ်နံရံကို ဖန်တီးပေးမည် ဖြစ်သည်။ အစွန်းအထင်းခံနိုင်မှုကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောကြာင့် နံရံများသန့်ရှင်းမှု ရှိစေရန် ထိန်းသိမ်းရ ပိုလွယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သင့်အိမ်လေးမှာ အမြဲ သစ်လွင် နေမည်ဖြစ်သည်။ Jotun ၏ ကိုယ်ပိုင်စစ်မှန်သည့် အရောင်နည်းပညာကြောင့် အရောင်များဟာ အမြဲ တူညီနေမှာဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့်အပြောင်းအလဲမရှိ လှပသေသပ် သောနံရံများကို သေချာပေါက်ရရှိ နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ခမ်းနားပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ဆိုတာ နံရံနဲ့ ပရိဘောဂတွေထက်ပိုပါသည်။အသေးစိတ် အချက်အလက်လေးတွေက တဆင့်ဖော်ပြရတာမျိုးပါ။ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားပြီး အလှဆင် သစ်သားထောင့်ချိုးတွေကို ချောမွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်ဖြစ်စေမယ့် ရေဆေး Majestic Supreme Finish ကိုထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သူ့ရဲ့ အစွန်းအထင်းခံနိုင်မှုကြောင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာမှာ လွယ်ကူစေမည့် အပြင်သူ့ရဲ့မူလအရောင်ကိုလဲထိခိုက်မှုမဖြစ်စေပါဘူး။ Majestic Supreme Finish က သာမန် အိမ်သုတ်ဆေးတွေလောက် အနံ့မပြင်းတဲ့အပြင် ခြောက်သွေ့မှုလဲ မြန်ဆန်တာကြောင့်သင့် မိသားစု သက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လဲပိုသင့်လျော်ပါသည်။
ဆယ်စုနှစ်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခြင်းက ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ စိတ်တွေကို အသစ်တဖန် ပြန်လည်မွေးဖွားစေတာမို့-အနာဂတ်အတွက် မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ရှိလာပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့တွေအတွက် ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို သုံးသပ်ရမယ့် အချိန်တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ရော ကိုယ့်အိမ်အတွက်ရောပေါ့- အိမ်ဆိုတာက ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖော်ပြရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့အပြင် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဘဝကိုအကောင်းဆုံး နေထိုင်ရှင်သန်ရာမှာလဲ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။
မကြာခဏ အရောင်တွေနဲ့ စတင်လေ့ရှိပါတယ်။ ကျွနု်ပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အရောင်တွေက ကျွနု်ပ်တို့ ခံစားချက်နှင့် စိတ်အခြေအနေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်။ အရောင်တွေက အိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ အငွေ့အသက်နဲ့ အိမ်ထဲမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝကို အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ အိမ်ရဲ့အရောင်နဲ့ စတင်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာ Jotun ရဲ့ Global Colour Manager Lisbeth Larsen နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပနဲ့ စကန်ဒီနေးဗီးယားတို့ရှိ သူမရဲ့ အရောင်ကျွမ်းကျင်သူတွေက ကမ္ဘာမှာ ခေတ်စားလာမည့် ဒီဇိုင်းနှင့်အရောင်များအား သေချာလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် အရောင်များ၏ နောက်ကွယ်မှ လူတို့၏အပြုအမူနှင့် လူမှုရေးအခြေအနေများကိုပါ တပါထဲလေ့လာသုံးသပ်သည်။ Jotun အခြေစိုက်ရာ နော်ဝေးရှိ Sandefijord ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေဟာ အရောင်တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး ဒီအရောင်တွေကပဲ လာမယ့်နှစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုလိုက်တာပါ။ ယခုလိုမျိုး ဆယ်စုနှစ်သစ်တစ်ခုကို စတင်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဒီဖြစ်စဉ်က ယခင်ကထက်ပိုမိုထင်ရှားပြီး အရေးပါပါတယ်။
“ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုရဲ့ အစပိုင်းက ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အဓိပ္ပါယ်အရှိဆုံးအချိန်တစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရောင်တွေက သာမန်ထက်ပိုလွန်တဲ့ အရည်အသွေးတွေရှိပါတယ်”ဟု Larsen ကပြောသည်။ သူတို့တွေဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ထုံမွှန်းနေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်မတိုရဲ့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တဲ့- ပိုမိုသင်ယူမလား သို့ ခရီးတွေပိုသွားမလား၊ ပိုမိုသတိရှိမလား သို့ တွေးတောဆင်ခြင်မလား၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်ပိုပေးပြီး ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ဖိုနဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေ မက်ဖို့ အစရှိတာတွေကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် Jotun မှထုတ်လုပ်ထားသော အရောင်(၁၂)မျိုး၏ တစ်ခုချင်းစီတွင် ပြင်းပြသော ဆန္ဒ၊ ခေတ်မှီလူနေထိုင်မှု၏ ရှုထောင့် (သို့မဟုတ်) ထင်ရှားသောစရိုက် လက္ခဏာကိုဖော်ပြသည်။ မြေကြီး ဆန်သောအနီရောင်မှသည် ရဲရင့်ပြီးဆန်းသစ်မှုရှိသော အပြာရောင်၊ နက်ရှိုင်းသောဉာဏ်ပညာ မှသည်မြူးကြွသွက်လက်သောအနီရောင် အထိ Jotun ၏ အရောင်သစ်၁၂ရောင်တွင်ပါဝင်သော အရောင်တစ်ခုချင်းစီကို ခံစားချက်တစ်ခုခြင်းစီအတွက် တွန်းအားပေးနိုင်ရန်ဖန်တီးထားသည်။
၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် JOTUN ၏ အရောင်သစ်များ
– 8546 LOCAL GREEN
သဘာဝတရားကို အိမ်တွင်းသို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည့် စိမ်းလန်းပြီ သဘာဝဆန်သော အရောင်။
– 11174 CURIOUS MIND
မြေဝါရောင်- ရင့်ကျင်မှုနှင့် ခွန်အားရှိမှု။
– 20144 GROUNDED RED
မြေကြီးအရောင်- နွေးထွေးမှုနှင့် အကာအကွယ်ပေးမှု။
– 5489 FREE SPIRIT
အပြာရောင်နှင့် အစိမ်းရောင်အား အချိုးကျစွာပေါင်းစပ်မှု။
– 20142 DAYDREAM
– 4863 STATEMENT BLUE
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်သောစွမ်းအား- ရဲရင့်မှုနှင့် တမူထူးခြားမှု။
– 11173 HUMBLE YELLOW
ချောမွေ့ဆန်းပြားသောအရောင်- ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၏ အနှစ်သာရ။
– 11175 ADVENTURE
နွေးထွေးပြီး မြေကြီးဆန်သောအရောင်- ခရီးမသွားရမနေနိုင်သောဆန္ဒရဲ့ လိမ္မော်ရင့်ရောင်။
– 20143 LIVELY RED
ရွှေရောင်နှင့် စွမ်းအားပြည့်ဝမှု- နွေးထွေးမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှု။
– 7637 EXHALE
အရောင်နုနှင့် သိမ်မွေ့သောအရောင်-သက်တောင့်သက်သာရှိသော အရောင်ဖျော့။
– 20145 WISDOMN
ဆန်းပြားသည့်ဝိုင်ကာလာအရင့်- ဆိတ်ငြိမ်မှုနဲ့ အားကောင်းမှု။
– 5490 SERENE BLUE
ခမ်းနားမှုနှင့် ငြိမ်သက်သောအရည်အသွေး- ပင်လယ်ပြင်၏ လွတ်လပ်မှုကို ပေါ်ပေါက်လာစေသည်။
“ကျွန်မတို့အနေနဲ့ အရောင်သစ်တွေ ဖန်တီးတိုင်းမှာ ဒီအရောင်တွေက ဖော်ပြပေးချင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြဲတန်းကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ခေတ်စားလာမှာနဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကို ခန့်မှန်းသုံးသပ်ရတာဖြစ်ပြီး ဒီရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုက လာမယ့်နှစ်တွေမှာ အရေးပါတဲ့ သက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အရောင်တွေဟာ လူတွေရဲ့ဘဝကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေချင်ပါတယ်။”
စိတ်ခံစားချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ လက်တွေ့ဘဝအပေါ်တွင်လဲ သက်ရောက်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အရောင်သစ်များကို ဖန်တီးထားသည်။ Jotun အဖွဲ့အနေနှင့် ယခုအရောင်၁၂ရောင်အား အမြဲခေတ်မှီနေမည့်အရောင်များ-လူကြိုက်များမှုနှင့် ဘက်စုံအသုံးဝင်မှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသော ယခင်ရှိပြီး အရောင်၈ရောင်နှင့် လိုက်ဖက်စေရန် ဖန်တီးထားသည်။ Jotun ၏ 2020 ကာလာဒီဇိုင်းများသည် အရောင်များအချင်းချင်းပေါင်းစပ်နိုင်ရန်လဲ ဖန်တီးထားသောကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေနှင့် မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားနှင့် ပြင်းပြသောဆန္ဒများကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရောင်များကို ရောစပ်ခြင်းနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီအချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောရမည်ဆိုလျှင် အရောင်၏သက်ရောက်မှုကို သုတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်တည်းသုံးသပ်နိုင်သည်။ Jotun Colour Assurance ကြောင့် ကဒ်ထဲတွင်ဖော်ပြထားသောအရောင်တစ်ခုချင်းစီသည် နံရံပေါ်တွင်လည်း တထပ်တည်း ဖြစ်စေရန် အာမခံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မမျှော်လင့်စရာ စိတ်မကျေနပ်မှုမျိုးမှရှောင်ရှား နိုင်သည်။
Line Thit Klein ၏ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဓာတ်ပုံများနှင့် ကာလရှည်ကြာလက်တွဲလုပ်ဆောင် ခဲ့သူများ ဖြစ်သည့် Oslo creative studio Kråkvik & D’Orazio တို့ကြောင့် Jotun ၏ 2020 Colour Design သည် Lisbeth နှင့် Jotun colour team ၏အမြင်နှင့် ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒများကို မျှဝေရာလမ်း ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို jotun.com နှင့် the Jotun Colour Dsign app တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ColourFamilyJotunJotun MyanmarLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMajestic True BeautyMyanmarMyanmar PR AgencyPaintPRPress ReleasePublic RelationsYangon
Previous Previous post: Suzuki Showcases Latest Vehicles & Technologies Under The Theme of ‘Pleasure of Driving’ at Yangon International Motor Show 2020
Next Next post: Suzuki to ConstructaNew Automobile Plant in Myanmar